DAAWO: Adrien Rabiot Oo Juventus Ka soo Degay Iyo Ishubaynta Old Lady Oo Si Layaableh U Socota - Gool24.Net
DAAWO: Adrien Rabiot Oo Juventus Ka soo Degay Iyo Ishubaynta Old Lady Oo Si Layaableh U Socota
Xidiga xulka qaranka France ee Adrien Rabiot ayaa ka soo digay magaalada Turin wuxuuna tijaabada caafimaadka u marayaa kooxda Juventus oo si layaableh kooxihii Yurub markale uga dul qaaday xidigan oo si xor ah lagu heli karo.
Heshiiskii Adrien Rabiot ee PSG ayaa dhacaya saqda dhexe ee caawa wuxuuna barri oo ay July 1 tahay si rasmi ah ugu biiri doonaa kooxda Juventus.
Juventus ayaa markale cadaysay in ay tahay boqorada Yurub ee ciyaartoyda xorta ah waxayna kooxdeeda iskugu keentay Aaron Ramsey iyo Adrien Rabiot oo ayna midkoodna hal Yuro ka soo bixin marka laga reebo heshiisyada shaqsiga ah ee ay sida layaabka leh ugu guulaysteen.
Adrien Rabiot ayaa khilaaf xoogan la soo galay kooxda PSG wuxuuna iska diiday in uu wax heshiis cusub ah saxiixo laakiin waxaa doonayay kooxaha Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal iyo kooxo aad u badan.
Maamulka kooxda Juventus oo khibrad layaableh u leh sida lagu hanto ciyaartoyda xorta ah ayaa Adrien Rabiot ka soo dajiyay Turin iyada oo diyaaradii siday soo cago dhigatay isla markaana uu hadda soo gaadhay kooxdiisa cusub ee Juventus.
Adrien Rabiot ayaa ku biiraya mashruuca uu Cristiano Ronaldo hogaaminayo ee ay Juventus ku doonayso in ay Yurub ku qabsato kadib sanado badan oo ay ku soo dhibtoonayeen UEFA Champions league.
Halkan ka daawo muuqaalka markii uu Adrien Rabiot diyaarada ka soo degay:
Guusha ay Juventus ka soo hoysay saxiixa Adrien Rabiot ayaa muujinaysa sida ay xagaagan uga go’antahay in ay kooxdeeda xoojin wayn u sameeyaan waxayna hadda qarka u saaran yihiin in ay dhamaystiraan heshiiska qaaliga ah ee De Ligt.
Juventus ayaa kooxda Ajax kula jirtay wada xaajoodka lagu dhamaystirayo De Ligt laakiin in ay haddaba khadka dhexe ku heleen Aaron Ramsey iyo Adrien Rabiot oo ay lacag la’aan kula soo wareegeen ayaa muujinaysa shaqada fiican ee ay maamulka Old Lady samaynayaan.
Adrien Rabiot ayaa marka uu tijaabada caafimaadka ka gudbo waxa uu saxiixi doonaa heshiis waqti dheer ah iyada oo kadib saxaafada loo soo bandhigi doono.